तुम्बाहम्फेले भनिन्, ‘उपसभामुखबाट राजीनामा दिन्छु, तर...’ - Everest Dainik - News from Nepal
तुम्बाहम्फेले भनिन्, ‘उपसभामुखबाट राजीनामा दिन्छु, तर…’
काठमाडौंः उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले राजीनामा गर भनेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निर्देशन दिनु गलत भएको बताएकी छन् । तर नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकाले आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताइन् ।
समाचार एजेन्सी जीएम मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘मार्ग प्रसस्त गर्छु तर राजीनामा दिँदा मैदान खाली हुन्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।’ राजनीतिक दलहले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नु केही मिनेट अगाडि जेष्ठ सदस्यलाई राजीनामा बुझाउने उनले बताइन् ।
तुम्बाहम्फेले भनिन्, ‘संसद खाली छाटो समय केही मिनेट मात्र हुन्छ, दिनको त कल्पनै गर्न सकिँदैन ।’ प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
याे पनि पढ्नुस उपसभामुखको मनोनयन आज हुँदै, वाम गठबन्धनमा उम्मेदवारबारे अझैं अन्यौल
मैले पनि सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा पाएँ कि नेकपाले राजीनामा दिन निर्देशन जारी र्गयो रे । तर मैले भनेको छु कि व्यवस्थापिकाको प्रमुखले एउटा घटनासँग जोडिएर राजीनामा दिइसकेपछि मैले नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छु । र, कुनै एउटा दलले नेतृत्वबाट बाहिर जाउ भनेर कुनै एउटा दलले भन्न संविधानतः मिल्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा बसेर काम गरिरहेको अवस्थामा म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ । जब यो पदमा निर्वा्चित भएँ, त्यसपछि मैले दल त्याग गरेको छु । साधारण सदस्य पनि छैन र स्वतन्त्र ढंगले संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छु ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, कस्तो छ ओली–प्रचण्ड समूहको तयारी ?
संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ देखि ६ सम्म र्हेयौं भने जसमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्छ र त्यसमा पनि एक महिला हुनुपर्छ भनिएको छ । अहिले यो कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
सभामुख पद रिक्त छ । जुन दलले मलाई निर्वा्चित गराएर यहाँ पठायो, त्यही दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । दलले नभनेपनि मैले संविधानअनुसार राजीनामा दिनुपर्छ र दिन्छु पनि भनेको छु ।
मैले कतिबेला राजीनामा दिन्छु भन्ने तपाईंलाई बताइसकेँ । म फेरि पनि भन्छु, संविधानले प्रतिनिधिसभालाई कुनै एउटा समयमा रिक्त रहन्छ भनेर कल्पना नै गरेको छैन । र यो पदमा निर्वा्चित भएपनि प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्छु, कसैको डर नमानी संविधानको काम गर्छु भनेर मैले सपथ खाएको छु । संविधानले भनेको भन्दा दायाँबायाँ किन गर्ने ? त्यसैले जतिबेला दलहरुले उम्मेदवार तय गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाऔं भन्ने सन्देश दिन्छ, र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी हुन्छ, त्यसबेला राजीनामा दिन्छु ।
याे पनि पढ्नुस पार्टी फुट्ने हल्लाका माझ नेकपा सचिवालय बैठक शुरू, के होला निर्णय ?
मलाई कसैले केही भनेको छैन । धेरै चाहिँ के सुनेको छु भने तपाईंले कम्तिमा दलहरुले दबाव दिए पनि, नेतृत्वले दबाव दिएपनि तपाईंले अडान छाड्नु भएको छैन । एकदमै सही काम गर्नु भएको छ, तपाईंलाई स्यालुट गछौं भन्नु भएको छ । यो प्रतिनिधिसभाप्रतिको मायाको रुपमा मैले बुझेको छु । जीएम मिडिया
ट्याग्स: उपसभामुख, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे, नेकपा, प्रतिनिधिसभा